Ajụjụ 101… Ndị na-azụ ahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe ọchị na Starbucks | Martech Zone
Wenezde, August 16, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwere m ụbọchị ezumike taa (Achọrọ m ya!). Agụrụ m na blọọgụ ọzọ na ọtụtụ folks na-eme ọchụchọ maka "101". Ya mere… ka ọ na-adị na mbụ, Ana m anwale echiche a iji hụ ihe nzaghachi ya bụ. O juru m anya na ọ dị mfe iwepụta ihe ndị a, enwere ọtụtụ ihe n’ụwa, azụmaahịa na mba a na-agba m ara. N'ezie, ikekwe ọ bụ naanị m. Enwere ike ịjụ ajụjụ gị ma ọ bụ zaa m site na nkwupụta.
Gini mere Starbucks anaghị eme ka ogwe chocolate? (Echiche nwa m nwanyị afọ iri na abụọ!)
Kedu ihe kpatara ịchọrọ ihe 15 kachasị maka Express Lane? Kedu ihe kpatara na ị gaghị enwe opekata mpe 1 zuru ụgbọ ibu? Abụ m nwoke ahụ na-emefu ego niile!
Gini mere salad na akpa ji adighi nma?
Kedu ihe kpatara na ọ dị mma maka ụlọ akụ na-ana onye ogbenye ihe $ 30 maka ego nlele nke $ 1 mana ha agaghị enye ha kaadị akwụmụgwọ dị elu?
Kedu ihe kpatara ụlọ akụ nwere ike iji wepụ ego m ozugbo maka ego m dere ma ha tinye ụbọchị ise na ego m tinyere?
Ọ bụrụ na m nwere ike ịnweta kaadị 2Gb SD, kedu ka ị ga - esi tinye 500 nke ndị ahụ ma nye m kaadị 1Tb kama draịvụ ike yana akụkụ ndị na - akpụ akpụ na - ada ada?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ egwu anaghị enwe anyaukwu, keduzi ka ha si etinye ọtụtụ tọn na cri, bling, dubs, grills, wdg?
Ọ bụrụ na m nwere ike ige CD, nke a ọ pụtaghị na m ga-enwe ike ịde ya mgbe niile?
Kedu ihe kpatara nnukwu ụlọ ahịa ji atụpụta ihe niile na shelf wee were weghachite ihe niile n’ime akpa? Ọ bụ na e nweghị ọrụ ka mma?
Kedu ihe kpatara ọnwụ ọnwụ na-abụkarị mkpọrọ mkpọrọ, na mkpọrọ afọ ndụ bụ n'ezie afọ iri abụọ?
Kedu ihe kpatara na onye ọ bụla na-ekwu "Nkewa nke Churchka na Ọchịchị" mgbe ọ na-anọghị n'usoro iwu ochichi ma ọ bụ nkwupụta nke nnwere onwe?
Kedu ihe kpatara m ji akwụ ụgwọ maka ụlọ akwụkwọ ọha nke ụmụ m? Echere m na anyị kwụrụ ụtụ isi maka nke ahụ.
Kedu ihe kpatara na ọ dị mma maka gọọmentị ịgbalị ịgbanwe iwu nzuzo gbasara ịgbachitere nnwere onwe?
Gini mere enwere naanị sọọsọ abụọ ndị isi na United States?
Kedu ihe kpatara ahụike anaghị adị ọnụ ala maka ndị anaghị eji ya?
Kedu ihe kpatara uwe azụmahịa ụmụ nwanyị ji dị oke ọnụ ala karịa uwe ụmụ nwoke?
Kedu ihe kpatara anyị ji ege ndị na-ahụ maka ndụmọdụ anyị na-amaghị ntị ma mgbe ụfọdụ ọ bụghị ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị mgbe ha kwuru otu ihe?
Kedụ ka e si hapụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha dee iwu nke ha banyere ihe ziri ezi na ihe ọjọọ?
Kedu ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si agba ezumike nká tupu ndị agha agha?
Kedụ ka anyị ga - esi ghara ịtụ vootu maka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị?
Ọ bụrụ na ụmụaka m ga-anara SATs ka ha banye mahadum, kedu ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-esi lee ule iji banye n’ọfịs?
Gini mere mmiri m ji esi n’olulu a na-amata ebe m na-asa mmiri, ụlọ mposi na ebe ịsa ahụ?
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji eche na ụgbọ ala na-acha akwụkwọ ndụ bụ azịza, mgbe ha na-etinye ha na ntọala nwere ike sitere na kol na ike nuklia?
Kedu ihe kpatara na ọ dị mma ịnwe ebe a na-egwu mmanụ na azụ ụlọ onye ọ bụla na Texas, mana na Alaska ebe mmadụ na-ebighị?
Kedu ihe kpatara na anyị nwere ndị ọka ikpe, ndị uwe ojii steeti na ndị uwe ojii obodo niile n'otu ebe?
Ọ bụrụ na nke a bụ mba nweere onwe ya, gịnị kpatara na anaghị anabata ndị mmadụ ị doụ ọgwụ ọjọọ?
Gịnị kpatara ịgba chaa chaa na-akwadoghị belụsọ na ọ bụ gọọmentị na-agba lọtrị?
Gịnị mere mkpụrụ osisi ji dị oke ọnụ karịa mkpụrụ osisi nduku? Ehe, ọ na-eto n’elu osisi!
Kedu ihe kpatara iwu ọgwụ na ọgwụ ọjọọ? Ndenye ọgwụ na- ọgwụ ọjọọ.
Gini mere na United States enweghị ike ịgbanwe na sistemu metric? Ọ dị mfe ịkesa ma mụbaa site na iri!
Kedụ ka Akwụkwọ Nsọ na-esoghị na ndepụta aha ndị kacha ere akwụkwọ New York Times?
Gịnị mere ọtụtụ egwu Ndị Kraịst ji a suụ ara?
Gini mere swiiti na popcorn di oke onu na ulo ihe nlere? M ga-aga ọzọ mgbe ma ọ bụrụ na ọ bụghị… ma eleghị anya, na-emefu ego.
Gịnị kpatara ụlọ ahịa ji enwe ọtụtụ usoro ndenye ọpụpụ mgbe ọtụtụ n'ime ha mechiri?
Gini mere ichoro ka ndi mmadu gha akwu ugwo maka ihe oburu na you're gha buru uzo nye ya n'efu? Na-azụ m ihe ezighi ezi!
Kedu ihe kpatara na Puerto Rico abụghị steeti mana Alaska na Hawaii dị?
Kedu ihe kpatara na ndị agha anyị ga-agbaso iwu na ndị na-eyi ọha egwu anaghị eme?
Gini mere umuaka m ji enweghi oge n ulo akwukwo?
Gini mere eji eme otutu ihe omume ulo akwukwo n’oge oru?
Kedu ihe kpatara na ndị ọrụ mmekọ nwoke na nwoke adịghị mma?
Kedu ihe kpatara mmadụ niile ji eju anya mgbe m gwara ha na enwere m ikike nke ụmụ m?
Kedu ihe kpatara m ga-eji nwee mkpuchi dị iche iche maka anya, ahụ na ezé? Ọ bụghị ya bụ ọgwụ?
Kedu ihe kpatara ndị nwe ụlọ ji anapụ mmasị ha n'ụtụ isi mana ndị nwe ụlọ anaghị enwe ike ịnapụ ha ego mgbazinye? Ndi mgbazinye anaghị enyere aka na akụ na ụba, kwa?
Olee otú ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si baa ọgaranya?
Gini mere Al Gore ji were ugboelu nke onwe ya nye aka ikwu okwu banyere okpomoku uwa?
Ọ bụrụ na anyị na-alụ agha, kedu ka ụlọ ọrụ mmanụ ga-esi nweta uru ndekọ. Ọ bụ na ọnụahịa ahụ anaghị arị elu?
Kedu ka anyị si kwụsị spam?
Onye na-ezipụ spam ahụ ebe ị na-enweghị ike ịghọta okwu ọ bụla? Gịnị mere ha ji eziga ya?
Kedu ihe kpatara anyị ji ejide ndị agha n'ọkwa dị elu mgbe ọtụtụ ndị agha bụ ndị na-enweghị ike ịga kọleji ma ọ bụ si na nzụlite siri ike?
Kedu ihe kpatara na enweghị ike ịchụpụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị?
Kedụ ka Indiana siri gbanwee mpaghara oge ma nwee mpaghara ụfọdụ na ndị ọzọ?
Kedu ihe kpatara na anyị anaghị ejikọ ọba akwụkwọ ọha na ụlọ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma chekwaa ụyọkọ ego?
Kedu ka ndị omekome na-acha ọcha na-adị mfe mgbe ha na-ezu ohi karịa ndị omekome nkịtị?
Ọ bụghị ahịa ahịa ịgba chaa chaa?
Gini mere m ga-eji gaa ebe a na-a barụ mmanya ka mụ na nwoke kpawa? Any nwere ụmụ nwanyị na-alụbeghị nwanyị nọ na ala?
Kedu ihe kpatara Starbucks na Border enweghị Night Night?
Gịnị mere na anaghị enwekarị ozi ụlọ n’ụlọ? (imaatu: ikpochapu)
Gịnị ma ị machibido ibu na ụgbọelu?
Gịnị mere na ndị isi okpukpe anaghị ebili ọtọ mgbe ndị na-eso ụzọ ha na-ekwulu Chineke?
Gini mere France ji nwe osisi ike nuklia karie United States?
Kedu ihe kpatara na anyị enweghị ike ibubata mkpofu nuklia na mbara igwe?
Gịnị mere hemp iwu na-akwadoghị? Ọ na-eto ngwa ngwa karịa osisi, sie ike, na ọ bụghị ọgwụ.
Kedu ihe kpatara Tommy Chong ji gaa nga maka ngwa ọgwụ, mana Rush Limbaugh ka nọ na redio mgbe ọ doingụsịrị ọgwụ ọjọọ na iwu?
Kedu ka ihe si dị oke ọnụ na ụlọ ahịa dị mma? Ọ ga-aka adịrị m mma ma ọ bụrụ na akwụghị m nnukwu ego.
Kedu ihe kpatara anyị ji eti mkpu banyere ọnụahịa gas mana anyị na-akwụ $ 3.50 maka Grande Mocha na Starbucks. (Mmmmmm.)
Gịnị mere na otu oche oche ha abụghị? Ọ bụ naanị otu onye ka m na-ahụ n’ụgbọ ala ọ bụla ka m na-aga ọrụ.
Gini mere ndi oru nta akuko telivishọn ji maa nma?
Gịnị kpatara oke ibu ji bụrụ ọnọdụ ahụike naanị na United States?
Kedu ihe kpatara ị ga - eji buru ibu maka ego 49 ọzọ, mana ị nweghị oke ọkara ma chekwaa 49 cents?
Ọ bụrụ na mmega ahụ dị gị mma, kedụ ụzọ ọ bụla m ga-esi jee ije ma ọ bụ jiri ịnyịnya ígwè m rụọ ọrụ?
Kedu ihe kpatara na ị ga-eji votu n'ihi na mmadụ, mana enweghị ike ịme ntuli aka megide onye?
Gịnị kpatara o ji esiri anyị ike ịgụta vootu?
Kedu ihe kpatara na agaghị m enweta Grand Mocha na Ihe nkiri?
Gini mere anyị ji etinye uche nke ọma na ihe ndị na-eme ihe nkiri na-ekwu mgbe ihe niile ha na-eme bụ iji gosi na ha ji ego?
Kedu ihe kpatara m ga-eji gụọ otu isiokwu nke otu nwoke dere akwụkwọ nyocha akwụkwọ akụkọ banyere teknụzụ kama ịgụ blọọgụ nke nwoke ahụ na-ebi ndụ na teknụzụ?
O lee otu nwoke si na-eteta ụra n'isi ụtụtụ wee jụọ m otu dollar kwa ụbọchị m na-aga ọrụ enweghị ike inweta ọrụ?
Kedu ihe kpatara na ogwe anaghị enye ọrụ tagzi maka ndị na-a drinkụbiga mmanya oke?
Kedu ka anyị si enweghị ike ịhazigharị mkpịsị ugodi na kiiboodu maka ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ?
Ọ bụrụ na ájá na-egbu kọmputa gị, olee otu esi ewepụ na nzacha agaghị agbanwe?
Kedu ihe kpatara sistemụ arụmọrụ ji dị ọnụ ala karịa mmemme ọfịs?
Kedụ ka ha siri wulite igwe eji ebi ihe na draịvụ awụnyere na rawụta?
Kedu ihe kpatara na ha echepụtaghị DVD iji kọwaa nkọwapụta?
Gịnị mere ụmụ m enweghị ike ikpe ekpere n’olu dara ụda n ’ụlọ akwụkwọ ebe nnwere onwe ikpe okpukpe bụ ihe iwu kwadoro?
Kedu ihe kpatara na ndị mmadụ enweghị ike ịghọta na ụtụ isi dị ala na-eweta ụtụ isi ụtụ karịa?
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ụgbọ elu ji enwe naanị ụgbọ elu na-apụ mgbe oche niile juputara kama na oge.
Gịnị mere ọnụahịa ụgbọ elu ụgbọ elu ji abawanye ọnụ ka ọ na-erute oge ọpụpụ? Gịnị mere na ọ gaghị adị ọnụ ala?
Kedu otu m ga - esi debanye aha maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ n'ịntanetị na ọtụtụ ebe, mana enweghị m ike ịkagbu ya n'ịntanetị?
Gini mere ndị na-ebu ekwentị anaghị enye gị ego ole ị na-azụ ha?
Kedu ihe kpatara na anaghị akwụli m wireless keyboard na òké rechargeable?
Kedu ihe kpatara na onye ọ bụla ga-enwerịrị mkpuchi ụgbọ ala? Gini mere na enweghị m ike ịnweta ego mkpuchi?
Kedu ka osi bia mgbe obula m na agba oke oke, ndi ozo nile na agba oso… mana oge obula m na-agba oso, a na-adọta m?
Gini mere na ụlọ ọrụ anaghị enye ndị ọrụ ha otuto na mgbazinye ego?
Kedu ka ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji si arụ ọrụ mgbe ọ bụla n'ọhịa ha nwere asambodo?
Kedụ ka ndị mmadụ na-agaghị enwete nzere maka 'oge elebara anya' na ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ?
Gini mere PETA ji etinye otutu umu anumanu ura?
Kedụ ka ndị mmadụ si alụọ bọọlụ bọọlụ mana ọbụghị ebe ngosi nka.
Kedụ ka ndị isi ọjọọ nwere nnukwu ọrụ na-anaghị ewepụ ha n'ọrụ na ndị ha nwere ike ịrịọ mgbaghara?
Kedu ka ụlọ ọrụ buru ibu, ha na-nwayọ nwayọ?
Kedu otu esi abịa n'ịntanetị, m ga-amụtakwu asụsụ na teknụzụ karịa obere?
Kedu ka Yahoo si !, Google, Microsoft, Monster, ADP, ma ọ bụ Careerbuilder enyebeghị m $ 1 nde dollar maka Payraise mgbako ma?
[Tinye ajụjụ gị ebe a]
Mara: Echiche maka ndepụta a sitere ProBlogger wee banye na post a na nke ya Nchịkọta Idekọ Otu maka Ndepụta.
ezi echiche na-akpali akpali….
Aug 18, 2006 na 12:44 PM
Ezi ndepụta - ị na-ewelite ajụjụ ndị mara mma. Ọ ga-amasị gị ma ọ bụrụ na anyị agbaziri ụfọdụ n'ime ha maka ụfọdụ mmemme na Your Cre8tivity?
14. N'ihi gịnị ka e ji nwee naanị nnọkọ oriri na nkwari abụọ dị na United States?
Anyị nwere ha n'ihi na anyị nwere mmeri na-eme ntuli aka niile. Ndị Europe nwere usoro dị iche iche maka ntuli aka ha, nke na-akwado ọtụtụ ndị otu na ịchịkwa njikọta.
28. Gini mere nkpuru ji di oke onu ahia karie bekee? Ehe, ọ na-eto n’elu osisi!
Otutu ego nke nkpuru osisi ohuru bu n’ihi mmebi. Nduku na-eto n’ime ala ma dịkwa ọnụ ala.
36. Gịnị kpatara na Puerto Rico abụghị steeti mana Alaska na Hawaii dị?
Ndị Puerto Rico tụrụ vootu ka ha ghara ịbụ Steeti.
37. Kedu ihe kpatara na ndị agha anyị ga-agbaso iwu na ndị na-eyi ọha egwu anaghị?
A na-akpọ ha ndị na-eyi ọha egwu kpomkwem n'ihi na ha anaghị agbaso iwu agha obodo.
43. Gini mere ndi nwe ulo ji anara ha ego ha n’ego ụtụ ma ndi nwe ego enwegh ike iwepu ego ulo ha? Rentgbazinye ego anaghị enyere aka na akụ na ụba, kwa?
Onwere ego mgbazinye.
45. Gini mere Al Gore ji etinye ugboelu nke onwe ya na ntinye okwu ya banyere okpomoku uwa?
Ọ bụ n'ihi Al Gore ịbụ onye ihu abụọ elitist.
49 Gini mere anyi ji jide ndi agha dika onodu di elu mgbe otutu ndi agha bu ndi mmadu ndi n’enweghi ike inweta ulo akwukwo ma obu site na nzụlite aka?
Ọtụtụ ndị agha na-esite na nzụlite etiti.
53 Kedu ka ndị omekome na-acha ọcha na-adị mfe mgbe ha na-ezu ohi karịa ndị omekome nkịtị?
Mgbe nke a bụ ikpe, ọ nwere ike bụrụ na ọ bụ n'ihi na A. Ha nwere ndị ọka iwu ka mma, B. etinyeghị egbe na ihu onye ọ bụla iji nweta ihe ha chọrọ.
63. Gịnị kpatara Tommy Chong ji gaa nga maka ngwa ọgwụ, mana Rush Limbaugh ka nọ na redio mgbe ọ doingụchara ọgwụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị?
Tommy nwetara bta na Utah. Utah bụ steeti siri ike. Maka ihe ọ bara uru, Salt Lake nwere ike bụrụ obodo ikpeazụ kachasị na Amerịka ebe ndị mmadụ anaghị akpọchi ụzọ ha n’abalị.
66. Gini kpatara na oche ugbo ala ha adighi? Ọ bụ naanị otu onye ka m na-ahụ n’ụgbọ ala ọ bụla ka m na-aga ọrụ.
A na-akpọ ụgbọala ndị na-alụghị di ma ọ bụ ọgba tum tum.
70. Ọ bụrụ na mmega ahụ dị gị mma, kedụ ka ụzọ ọ bụla ga-esi dịrị m ije ma ọ bụ gbaa ịnyịnya ígwè m ịrụ ọrụ?
M na-agba ịnyịnya ígwè m arụ ọrụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ịga ije ma ọ bụ jiri ịnyịnya ígwè gị rụọ ọrụ, wee chọta ọrụ dị nso n'ụlọ ma ọ bụ kwaga nso na ebe ọrụ gị. Ọ bụghị ọrụ dịịrị onye ọ bụla n’ụwa ka iwulite ụzọ ụkwụ na ụzọ ịnyịnya igwe gburugburu mma gị.
77. Gini kpatara na ogweghi inye ndi mmadu ndi na a drinkubiga mmanya oke?
Ọtụtụ n'eziokwu ga-akwụ ụgwọ maka tagzi maka ndị ahịa mmanya na-egbu, n'ihi nsogbu iwu metụtara ya.
83. Gini mere ụmụ m enweghi ike ikpe ekpere n’olu dara ụda n ’ụlọ akwụkwọ ebe nnwere onwe okpukperechi bụ nke iwu obodo kwadoro?
Dị ka m ghọtara iwu ahụ, ụmụ gị nweere onwe ha ikpe ekpere n'ụlọ akwụkwọ. Obu ihe megidere iwu onye nkuzi isonye ma obu gbaa ha ume ime otu a.
11. Gini mere onye obula ji ekwu â ?? Nkewa nke uka na nke alaâ ??? mgbe ọbụghị na Iwu ma ọ bụ Nkwupụta Nnwere Onwe?
Nke a bụ akara ọkọlọtọ nke ACLU ji, ndị mgbasa ozi na-emesapụ aka enweghị mkpali ịma aka na ya.
19. Kedu ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si ala ezumike nká tupu ndị folti agha?
Ndị agha agha nwere ike ịla ezumike nká dịka ụbọchị ọmụmụ nke 37th.
20. Kedụ ka anyị si aga ịtụ vootu na ebuli ndị ndọrọndọrọ ọchịchị?
Anyị nwere Republic nke ndị ọchịchị a họpụtara na-eme iwu na iwu, karịa ọchịchị onye kwuo uche ya, nke a na-eme iwu na iwu site na ịchọrọ ndị mmadụ.
22. Gini mere mmiri m ji esi n’olulu mmiri na-amata ebe mmiri na-asa, ebe mposi na nke ebe eji asa mmiri?
Mụ na gị bi na Indianapolis, mmiri dị n’ime mmiri anyị nwere limestone dị ukwuu, nke na-ahapụ ntụpọ ahụ.
34. Gini mere ulo ahia nwere otutu uzo eji achu ego mgbe otutu n’ime ha mechiri?
Ha na-eji uzo ndi ozo amara n’oge ekeresimesi juputara na ndi ahia.
38. Gini mere umu m ji enwe otutu oge akwukwo?
Ya mere umuaka nwere ike inyere pa ha aka n’oru ugbo.
40. Gịnị kpatara na ndị mmekọ nwoke na nwoke abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha adịghị mma?
Gini mere ndi oru ndi mmadu adighi nma Enwere m ike inwe njikọ obodo na hamster m; Echere m na atụmatụ ahụike m kwesịrị ikpuchi ya. Gini banyere otutu ndi Mormons nwere ike ha na ndi nwunye iri na ano?
41. Gịnị kpatara oji eju onye ọ bụla anya mgbe m gwara ya na ejidere m ụmụ m nke ọma?
O nwere ike ịbụ na ọ na-eju ha anya n’ihi na ọ fọrọ nke nta ka ụmụ nwoke ghara inweta ikike zuru oke nke ụmụ ha na ịgba alụkwaghịm Indiana. A na-enyekarị nna ikike zuru nna naanị mgbe nne mere obere oge nga.
44. Kedụ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si baa ọgaranya?
Ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweta akụnụba ha tupu ha abata n’ọchịchị. Ọ bụrụ na mmadụ baa ọgaranya mgbe ọ nọ n'ọchịchị, ọ ga-abụ na ha emeghị ihe n'eziokwu. Ajụjụ gị nwere ike ịbụ â ?? itGịnị mere o ji bụrụ naanị ndị nwere akụ na ụba ka ha na-azọ ọchịchị? Azịza ya ga-abụ n'ihi na ndị nọ na klas na-arụsi ọrụ ike na-akpata ihe ha ga-eji na-azọ ọfịs.
46. ​​Ọ bụrụ na anyị nọ n’agha, kedu ka ụlọ ọrụ mmanụ ga-esi na-enweta uru ndekọ. Nke a abụghị ego akwụ ụgwọ ahụ?
A na-edozi ego mmanụ site na ọkọnọ na mkpa. Companieslọ ọrụ ngwanrọ na-enweta uru ndekọ, ọnụahịa ahụ ọ na-abawanye? Idozi ọnụ ahịa na-eduga ụkọ, ịkwakọba na ahịa ahịa ojii.
50. Gini kpatara na apughi ichupu ndi ochichi?
Ha nwere ike ịbụ, ha nwere ike tọpụ na ntuli aka. Ntuli aka California chetara, were nke a n'ọkwa ọhụrụ.
51. Kedụ ka Indiana siri gbanwee mpaghara oge ma nwee mpaghara ụfọdụ na ndị ọzọ?
Dika m nwere ike igwa, Indiana mpaghara hopping nwere ihe jikotara Hoosiers nke adighi na uche karia. Okwu a dum enweghị isi.
54. Ọ bụghị ịgba chaa chaa na ngwaahịa ahịa ịgba chaa chaa?
Echere m na ọ bụ ịgba chaa chaa, mana ọbụlagodi ịgafe n'okporo ámá bụ ịgba chaa chaa n'ụdị ụfọdụ. Echere m na ọ dị iche na egwuregwu n'ihi na ejikọtaghị ya na ntụrụndụ.
55. Gini mere m ji aga ebe ana-a aụ mmanya ka mụ na nwoke kpawa? Enweghi ụmụ nwanyị ọ bụla na-alụbeghị di na nwunye?
Anurum ka ndi nwanyi na-alughi di na nwunye juo ajuju a. Ana m eche na nsogbu ị na-enwe nwere obere ebe ị ga-achọ, ka onye ị na-achọ. M ga-eche na ị na-ezute ụmụ nwanyị na-alụbeghị di na ala oge ụfọdụ mana ha abụghị ụmụ nwanyị ị na-achọ.
56. Gini kpatara na Starbucks na Border enweghị Night Night?
Echere m na abalị ụmụ nwanyị na-ezo aka na enweghị ụgwọ mkpuchi maka ụmụ nwanyị. Ebe ọ bụ na Starbucks anaghị agwa gị ka ị banye, anaghị m ahụ etu nke a ga-esi tinye. Ndị mmadụ na-aga ebe a na-a barsụ mmanya n'ihi na mmanya na-ebelata ihe mgbochi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na n'ihi na ịgba egwu bụ ụfọdụ ụdị egwuregwu dị egwu.
57. Gini mere na adighi enwe ozi ozo site n’onu uzo? (Ihe atụ: nhicha)
Indianapolis nwere ọrụ ihicha site n’ụlọ ruo n’ụlọ. Enweghi otutu oru ndia n'ihi na ha di oke onu ahia karia ha nile na-aru oru ulo ndi ozo.
60. Gini kpatara France ji nwe ike osisi nuklia kari United States?
Ekwenyere m na e nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Isi bụ ọtụtụ n'ihi enweghị French coal. N'ime mba ndị mepere emepe, naanị France na Japan enweghị oke kol iji mepụta ọkụ eletrik. Japan dịtụ ka Atom phobic maka ihe doro anya.
61. Gini mere na anyi enweghi ike ibupu ahihia nuklia gaa na mbara?
Shutgbọ mbara igwe ndị na-emechi anya na-ewepụ ikuku ya oge ụfọdụ.
62. Gịnị kpatara hemp ji emebi iwu? Ọ na-eto ngwa ngwa karịa osisi, sie ike karịa, ọ bụghị ọgwụ ọjọọ.
Amaghị m na ụlọ ọrụ hemp bụ ihe megidere iwu. O yiri ka m na-echeta hemp uwe ịbụ fashionable a afọ ole na ole azụ, Echere m na dum ulo oru hemp bụ n'uzo na ezighi ezi bụ ihe mepere emepe akụkọ ifo.
64. Kedu ka ihe siri dị oke ọnụ n’ụlọ ahịa dị mma? Ọ ga-aka adịrị m mma ma ọ bụrụ na akwụghị m nnukwu ụgwọ.
Na-akwụ ụgwọ maka ịdịmma nke inwe ụlọ ahịa dị nso n'ụlọ gị.
65. Kedu ihe kpatara anyị ji eti mkpu banyere ọnụ ahịa gas mana anyị na-akwụ $ 3.50 maka Grande Mocha na Starbucks. (Mmmmmm.)
Eji m igwe kwụ otu ebe arụ ọrụ ma na-a andụ mmiri. A na m eche na nsogbu na-enye ndị mmadụ nsogbu bụ na ọnụahịa mmanụ ụgbọala na-agbanwe agbanwe kwa ụbọchị ma ha aghọtaghị ihe kpatara ya.
ọ bụrụ na m ga-enwekwu oge iji gụọ ihe a.
26. Maka na ọbụghị ihe niile nwere ike ịdị na Starbucks. (ma)
50. Maka na ha bụ ndị mgbanaka na-anaghị afụ ụfụ.
48. The blog ìgwè mmadụ!